पूर्व अर्थमन्त्री भट्टराई, पाण्डे र महतलाई मन परेन अर्थमन्त्री खतिवडाको बजेट :: Setopati
पूर्व अर्थमन्त्री भट्टराई, पाण्डे र महतलाई मन परेन अर्थमन्त्री खतिवडाको बजेट
पूर्वअर्थमन्त्रीहरु क्रमस डा. बाबुराम भट्टराई, रामशरण महत र सुरेन्द्र पाण्डे
पूर्व अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराई, रामशरण महत र सुरेन्द्र पाण्डेले बजेटको आलोचना गरेका छन्। म्रौद्रीक नीतिमा पिएचडी गरेका अर्थशास्त्री खतिवडाको बजेटप्रति उनीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। महतले ट्वीटबाट आलोचना गरेका हुन्। भट्टराई र पाण्डेले भने बजेटबारे संसद भवनमा सञ्चार माध्यमकै अगाडि बेखुसी प्रकट गरेका हुन्।
बजेटको विषयलाई लिएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै नेताहरुले समेत निराश व्यक्त गरेका छन्। नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गरेका भट्टराईले बजेटले आफूलाई निशास तुल्याएको बताएका छन्।
पूर्व अर्थमन्त्री एवम् नेकपाका नेता पाण्डेले बजेटको ‘फोकस’ नपुगेको बताएका छन्।
‘यो बजेटमा कुनैपनि फोकस छैन’, पाण्डेले भने, ‘८ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गर्ने कार्यक्रम छैन। अझ बजेटको ठूलो अंक साधारण खर्च छ।‘
उनले केन्द्र सरकारले ठूला आयोजनामा ध्यान केन्द्रीत गर्न नसकेको टिप्पणी गरे।
भट्टराईले भने दुई तिहाईको बहुमत रहेको सरकारले उडान भर्ने मौका गुमाएको बताए। ‘बजेटले निराश भएँ’, भट्टराईले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रमका सपना बजेटमा अभिव्यक्त भएन। दुस्वप्न भयो। यसले राम्रो संकेत गरेन।‘
उनले ठूला पूर्वाधारमा लगानी नगरिएको र शिक्षामा बजेट नबढाइएको प्रति चित्त नबुझेको बताए। ‘प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा भनियो’, भट्टराईले भने, ‘प्राविधिक शिक्षामा ८४ करोड बजेट भनेको कनिका छरेजस्तो भयो।‘ भट्टराईले आफ्नो ‘सपना तुहिएको’ भन्दै दुखित भएको बताए।
पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतले बजेटको आकार ठूलो भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले केन्द्र सरकारले १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट ल्याएको अब प्रदेशहरुको बजेट आउँदा कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ५० प्रतिशत पुग्ने दावी गरेका छन्।
नयाँ संविधान अनुसार असार १ गते प्रदेशहरुले नयाँ बजेट ल्याउनेछन्।
‘बजेट भाषण कर्णप्रिय छ, लक्ष्य ,आकांक्षा र आश्वासनहरूको पोको ठूलो छ’, महतले ट्वीट गर्दै लेखेका छन्, ‘तर कसरी व्यवहारमा हासिल हुने विश्वसनीय आधार छैन! बजेटको आकार ठूलो छैन भन्ने पनि सुनियो,प्रदेश र स्थानीय तहका बजेट आएपछि थाहा होला जिडिपीको करिब ५० प्रतिशत सम्मको आकार!’
बजेट भाषण कर्णप्रियछ,लक्ष,आकांक्षा र आश्वासनहरूको पोको ठूलोछ,तर कसरी व्यवहारमा हासिलहुने बिस्वसनीय आधार छैन!बजेटको आकार ठूलोछैन भन्ने पनि सुनियो,प्रदेश र स्थानीय तहका बजेट आएपछि थाहहोलाGDPको करिब ५० प्रतिशत सम्मको आकार!
— Ram Sharan Mahat (@ramsmahat) May 29, 2018
उनले नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा धेरै बजेट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा विनियोजन गरिएको टिप्पणी गरेका छन्। बजेटको १२ प्रतिशत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखिएको उल्लेख गर्दै उनले १ खर्ब ५६ अर्ब २८ करोड बजेट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखिएको तथ्याङ्क समेत सार्वजनि गरेका छन्।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ १५, २०७५, १२:३५:००
सर्वोच्च अदालतभन्दा सर्वोच्च जनताको निर्णय होः पूर्वसभामुख महरा
जनयुद्वको नेता प्रचण्ड र जबजको नेता माधव नेपाल भएको पार्टी मुलधार होः वर्षमान पुन
प्रधानमन्त्री संविधान भत्काउने योजनामा हुनुहुन्छ : घनश्याम भुसाल
मदन भण्डारीले केपीको हातमा पार्टी गए, पार्टी बर्बाद हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो, आज त्यही भयो: नेपाल